Plum Orchard | Tantsaha anaty aterneto | December 2019
Sokajy Plum Orchard
Inona no atao hoe siderata ho an'ny ovy?
Ny zaridaina rehetra dia resy lahatra fa ny legioma lehibe ao amin'ny zaridaina dia tokony hifanentanana amin'ny tontolo iainana. Noho izany, maro no tsy mampiasa alika simika ao amin'ny zaridainy. Ho an'ny fanangonam-bokatra tsara dia zava-dehibe ny tsy hamongorana ny tany. Zava-dehibe izany! Afaka maniry amin'ny toerana iray mandritra ny 4 taona ny ovy. Aorian'izany dia mila miova ny fiantsonan'ny ovy.
Fomba mahomby hanaraha-maso ny bibikely
Fantatry ny rehetra fa zavamaniry zaridaina sy zaridaina maro no iharan'ny vokatry ny voka-dratsin'ny micro-organisms sy ny parasite samihafa. Tsy misy an-dàlambe sy kisoa. Raha tsy fantatrao ny fomba hikarakarana tsara ny volon'ilay lohataona amin'ny lohataona, ary tsy mandray fepetra fisorohana na fitsaboana sahaza, dia tsy hamela anao hanangona vokatra tsara avy amin'ny voankazo matsiro ny bibikely.
Afenina dia iray amin'ireo bibikely malaza indrindra amin'ny hazo zaridaina. Manimba ny zavamaniry izany, mandra-pahafatiny. Hojerentsika ato amin'ity lahatsoratra ity fa misy hazo mitsimoka mampidi-doza ary ny fomba hiatrehana ity loza ity. Inona no mampidi-doza ho an'ny fimamoana? Noho ny fihanaky ny areti-pahaizana, ny mpikaroka tsirairay dia mila mahafantatra ny endriky ny kofehy sy ny fomba hiatrehana izany.
Plum: tombon-tsoa, ​​fahasimbana, votoatin'ny kaloria, fananganana, fampiasana
Plum dia iray amin'ireo vokatra malaza indrindra eo amin'ny ankizy sy ny olon-dehibe. Ankoatra ny zava-misy dia misy tsindrin-tsakafo maro be avy aminy, ny voankazo ihany koa dia manana fanasitranana maro. Ary ny pneoma dia tsy mamery ny fananany amin'ny fitsaboana rehetra. Plum: Ny vidiny mahavelona, ​​vitamina sy mineraly Plum dia heverina ho vokatra ara-tsakafo, ny vidin'ny sakafo dia eo amin'ny 30 kcal isaky ny 100 g
Soso-kevitra momba ny fihinanana caviar amin'ny squasha amin'ny ririnina
Ny karazana varimbazaha tsara indrindra amin'ny fambolena any Siberia
Ahoana no hanangonana holatra amin'ny ririnina any amin'ny banky: fomba tsotra sy mahasalama miaraka amin'ny sary
Fitaovana tsotra ho an'ny ravinkazo vita amin'ny ravinkazo miaraka amin'ny karazan-tsakafo samihafa ao anaty lafaoro - ahoana no handrahoana sy hikolokoloana?
Ahoana ny fomba ampiasanao Fokin-flater eo amin'ny zaridaina
Misafidiana lapo-tavoahangy ary ampianaro azy any amin'ny toeram-pivoahana
Oroka malaza: Philadelphia orchid sy torohevitra momba ny fikarakarana sy famokarana ao an-trano
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Plum Orchard